घट्दै लगानीकर्ताको मनोबल - Naya Patrika
घट्दै लगानीकर्ताको मनोबल
काठमाडौं | साउन २२, २०७५
लामो समयदेखि बजारले गति लिन नसकेपछि लगानीकर्ताको मनोबल घट्दै गएको छ । बजारका सबै वातावरण पुँजीबजारमैत्री नै भए पनि नेप्से बढ्न नसकेपछि लगानीकर्ताको मनोबल घटेको हो । गत आवको वित्तीय विवरण सूचीकृत कम्पनीहरूले प्रकाशित गरिरहेका छन् । वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीहरूले सन्तोषजनक नाफा आर्जन गरेका छन् ।
यसका साथै बैंकहरूको ब्याजदरमा पनि कमी आएको छ । तर पनि बजार बढ्न नसकेपछि लगानीकर्ताहरू पर्खन बाध्य भएका छन् । लगानीकर्ताहरूले पनि लगानीको उचित रणनीति बनाउन कठिन भइरहेको एक लगानीकर्ताले बताए ।
केही लगानीकर्ता भने अहिले बजारमा प्रवेश गर्ने वेला हो भनिरहेका छन् । बजारमा सेयर आपूर्ति बढिरहेको छ । यसले बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । आपूर्ति मात्र बढ्नु तर बजार विस्तारका कार्यहरूमा ढिलाइ भइरहेका कारण बजारमा माग बढ्न नसकेकोले नेप्से सुस्ताएको एक ब्रोकरले बताए ।
साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव २१ अंक घटेर १ हजार १ सय ८९ दशमलव ६७ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । बजार खुल्नेबित्तिकै तीव्र गतिमा उकालो लागेको नेप्से १ हजार १ सय ९२ बिन्दुमा पुगेको थियो । तर, सोही गतिलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि नेप्से पुनः ओरालो लागेको हो । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव शून्य ६ अंक घटेर २ सय ५० दशमलव ९१ बिन्दुमा पुगेको छ ।
यस दिन १ सय ४८ कम्पनीको २ हजार ८ सय ७४ पटकको कारोबारमा रु. १९ करोड १७ लाख ४८ हजार १ सय २० बराबरको ७ लाख ९६ हजार ७ सय ३४ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ४१ दशमलव ५१ बिन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार रकम र सेयर संख्याका आधारमा यस दिन प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडको संस्थापक सेयर अगाडि रहेको छ । सो कम्पनीको यस दिन २ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँबराबरको २ लाख ४१ हजार कित्ता संस्थापक सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
१ बराबर २ दशमलव ८१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका कारण लगानीकर्ताहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । कारोबार संख्याका आधारमा यस दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड अगाडि रहेको छ । सो बिमा कम्पनीको यस दिन १ सय २४ पटक सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य यस दिन करिब १० प्रतिशत बढेको छ । मल्टिपर्पोज फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य यस दिन सर्वाधिक ८ दशमलव ६ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएका १ सय ४८ कम्पनीमध्ये यस दिन ५५ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने ६५ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी २८ कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
सोमबार व्यापार समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, लघुवित्त समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव १९ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक समूहको शून्य दशमलव १२ प्रतिशत र जलविद्युत समूहको शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बढेको छ ।
अन्य समूहको परिसूचक यस दिन शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत, होटेल समूहको शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत र जीवन बिमा समूहको शून्य दशमलव २८ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएको निर्जीवन बिमा र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने क्रमशः शून्य दशमलव शून्य ९ र शून्य दशमलव शून्य ७ अंक घटेको छ ।
प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको १ः२.८१ हकप्रद
प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडले भदौ ५ गतेदेखि १ बराबर २ दशमलव ८१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १ सय अंकित मूल्यका ५८ लाख १ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । हकप्रद निष्कासन बन्द हुने मिति असोज ८ गते रहेको छ ।
कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सेयरधनीहरूले बिक्री प्रबन्धक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको केन्द्रीय तथा शाखा कार्यालय, सनराइज बैंकको विराटनगर, पोखरा, वीरगन्ज, बुटवल, धरान, नारायणगढ, नेपालगन्ज, दमक, राजविराज तथा लहान शाखा कार्यालय र सि–आस्वा प्रणालीमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. २१ करोड रहेको छ भने हकप्रद सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ८० करोड १ लाख पुग्नेछ । साउन २२ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरूले सो हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नेपाल बैंकको एफपिओ बाँडफाँट
नेपाल बैंक लिमिटेडले साउन २० गते थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) बाँडफाँट गरेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता रु. १ सय अंकित मूल्यमा रु. १ सय ८० प्रिमियम मूल्य थप गरी प्रतिकित्ता रु. २ सय ८० मा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८ सय ५८ कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो । बैंकले असार १५ गतेदेखि साउन १३ गतेसम्म आवेदन दिएका सेयरधनीहरूलाई ९३ लाख ७५ हजार ७ सय ५० कित्ता बाँडफाँट गरेको हो । बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
सोमबार नेप्सेले सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको मूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले कम्पनीको १ सय ६७ प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको समायोजन मूल्य रु. १ सय ८ दशमलव ६१ तोकेको छ । समायोजनका लागि कम्पनीको औसत आधारमूल्य रु. १ सय ५४ दशमलव ३१ तोकिएको थियो ।
कसुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले भदौ ५ गते ब्लुस्टार कम्प्लेक्स, त्रिपुरेश्वरमा साधारणसभा आयोजना गर्ने भएको छ । सभामा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने र प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।